As of 2019-05-26 15:00:00
MEGA:196.00 (45919)( -2.00) NMBMF:1153.00 (7178)( 81.00) JBNL:209.00 (79272)( -2.00) RBCLPO:9900.00 (430)( -200.00) API:155.00 (21026)( -8.00) PRVU:275.00 (70335)( -5.00) SINDU:138.00 (6430)( -6.00) PFL:140.00 (1440)( 0.00) SHIVM:559.00 (83023)( 12.00) UPPER:276.00 (131848)( -11.00) BPCL:420.00 (18195)( -4.00) NTC:731.00 (10182)( -9.00) BFC:102.00 (2763)( -3.00) AHPC:112.00 (41150)( -2.00) MNBBL:376.00 (12403)( 1.00) JBBL:152.00 (34415)( -3.00) SHL:244.00 (8445)( -1.00) ALICL:420.00 (3769)( -4.00) GBIME:305.00 (32329)( 1.00) SKBBL:997.00 (888)( 8.00) UIC:992.00 (14788)( 27.00) ADBL:426.00 (49929)( -5.00) ALBSL:441.00 (1480)( -4.00) HURJA:133.00 (54160)( 3.00) NBL:335.00 (141642)( -5.00) BOKL:271.00 (60691)( 0.00) NLICL:664.00 (896)( -4.00) SFFIL:225.00 (130)( -2.00) CORBL:121.00 (4330)( -6.00) HGI:382.00 (1803)( 1.00) RMDC:656.00 (2342)( -23.00) CHLBS:449.00 (460)( -3.00) SLICL:585.00 (6823)( -1.00) NCCB:259.00 (77876)( -4.00) CFCL:114.00 (2202)( -1.00) NABILP:803.00 (6169)( -9.00) GDBL:211.00 (7427)( -4.00) CHCL:532.00 (6889)( -7.00) VLBS:560.00 (949)( 5.00) NICL:391.00 (2727)( -4.00) GBBL:223.00 (26417)( -2.00) SCB:680.00 (3801)( -5.00) MLBL:196.00 (9202)( -1.00) SHPC:274.00 (30328)( -3.00) MLBBL:460.00 (483)( -1.00) SBI:474.00 (7066)( -8.00) NICA:477.00 (36547)( -7.00) NLG:804.00 (1193)( -13.00) DDBL:728.00 (1362)( -7.00) SDESI:606.00 (304)( 6.00) PCBL:313.00 (33407)( -6.00) RRHP:95.00 (730)( -1.00) LBBL:201.00 (47291)( -5.00) SADBL:149.00 (7178)( -2.00) BARUN:98.00 (550)( 1.00) CLBSL:560.00 (116)( -15.00) MSLB:1060.00 (436)( 2.00) GFCL:121.00 (1038)( -2.00) GBLBS:378.00 (7708)( 0.00) HIDCL:164.00 (58878)( -3.00) KBL:217.00 (29769)( -1.00) IGI:403.00 (1880)( -15.00) PMHPL:111.00 (610)( -2.00) UMHL:119.00 (3524)( 1.00) NIL:514.00 (5762)( -1.00) SRBL:256.00 (6401)( -2.00) KPCL:95.00 (500)( 0.00) GUFL:111.00 (220)( -6.00) PIC:1195.00 (3913)( -6.00) SICL:860.00 (4602)( -1.00) OHL:662.00 (9777)( -33.00) NLIC:932.00 (11176)( -8.00) HPPL:186.00 (1418)( 0.00) LVF1:10.22 (2000)( 0.01) MFIL:120.00 (2092)( -1.00) DBBL:147.00 (59519)( 0.00) MPFL:224.00 (5200)( -15.00) FMDBL:405.00 (1385)( -3.00) MBL:268.00 (22454)( -2.00) KNBL:143.00 (14284)( 3.00) PICL:695.00 (1873)( -9.00) UPCL:95.00 (6945)( -1.00) RLFL:141.00 (55067)( 0.00) GILB:1376.00 (5030)( 125.00) CCBL:168.00 (29756)( 0.00) NBB:224.00 (11735)( -1.00) GLICL:552.00 (1860)( 2.00) NHPC:70.00 (29933)( -3.00) SIC:1399.00 (2006)( -26.00) PLIC:460.00 (6181)( -7.00) RHPC:97.00 (237)( -2.00) SANIMA:354.00 (13544)( -4.00) NABIL:840.00 (5463)( -1.00) CIT:2581.00 (998)( -19.00) EIC:429.00 (515)( -1.00) RBCL:10920.00 (533)( -81.00) CBL:147.00 (48856)( 0.00) SBL:336.00 (10804)( 0.00) CZBIL:228.00 (18735)( -2.00) NIB:535.00 (12696)( -2.00) NNLB:400.00 (989)( 4.00) FOWAD:1501.00 (231)( -18.00) NIBPO:505.00 (1150)( -7.00) JFL:178.00 (2243)( 0.00) KSBBL:155.00 (12225)( -4.00) SWBBL:901.00 (528)( -5.00) EDBL:310.00 (495)( -3.00) HDL:1700.00 (12201)( -109.00) EBL:659.00 (13481)( -6.00) LBL:221.00 (16620)( -3.00) SAEF:9.76 (16700)( -0.05) HBL:580.00 (5343)( -12.00) NICGF:9.70 (5700)( 0.07) LGIL:500.00 (3650)( -1.00) SLBSL:560.00 (420)( -2.00) MHNL:102.00 (5630)( 3.00) RSDC:383.00 (1100)( -1.00) KBBL:225.00 (4344)( -3.00) SLBBL:483.00 (587)( 0.00) AKPL:192.00 (4013)( -13.00) NMFBS:1571.00 (84)( -28.00) NEF:8.30 (7107)( -0.03) UMB:1060.00 (170)( -15.00) NADEP:449.00 (1025)( -10.00) SMB:530.00 (250)( -20.00) KRBL:108.00 (2960)( -3.00) CBBL:949.00 (4657)( -3.00) LLBS:753.00 (419)( -7.00) NUBL:855.00 (544)( -5.00) SIL:593.00 (995)( 8.00) NLBBL:517.00 (510)( 0.00) ICFC:161.00 (3346)( -1.00) CEFL:101.00 (129)( -2.00) SMFDB:569.00 (197)( -1.00) AMFI:545.00 (110)( -17.00) DHPL:71.00 (441)( -1.00) RADHI:164.00 (510)( -12.00) PRIN:408.00 (3499)( -4.00) CMF1:9.90 (4700)( -0.03) MERO:597.00 (147)( -8.00) SBBLJ:197.00 (2850)( -5.00) LICN:1892.00 (2677)( -18.00) NSEWA:447.00 (130)( -6.00) GHL:90.00 (1245)( -6.00) SEOS:10.40 (22370)( 0.18) NMBSF1:10.71 (1500)( -0.07) JSLBB:2048.00 (98)( -27.00) SHINE:257.00 (2672)( -8.00) NMBHF1:9.41 (8500)( -0.07) GRDBL:114.00 (260)( 0.00) SEF:9.81 (24100)( 0.01) JOSHI:111.00 (210)( -12.00) NGPL:122.00 (154)( -3.00) SIFC:153.00 (3251)( -3.00) PROFL:106.00 (250)( -3.00) MSMBS:490.00 (11)( 5.00) KKHC:72.00 (416)( 0.00) AKJCL:81.00 (170)( -1.00) SLBS:850.00 (10)( -1.00) GBIMEP:174.00 (26580)( 0.00) LEMF:8.13 (5000)( 0.15) NIBLPF:7.21 (253)( -0.07) SMATA:1360.00 (209)( 30.00) KADBL:184.00 (670)( 3.00) NIBSF1:9.35 (100)( 0.00)
‘बीमा अवार्नेश बढाउनु पर्छ’
पालमा बीमाको इतिहास झण्डै ७ दशकको छ । नेपाल बैंक लिमिटेडको आफ्नो आन्तरिक सम्पत्तिको सुरक्षण गर्ने उद्देश्यले माल चलानी तथा बीमा अड्डाको नाममा निजी क्षेत्रको सहभागितामा वि.सं. २००४ मा स्थापना भएको बीमा कम्पनीले बीमाको इतिहास रचेको थियो । त्यति बेला दुई दर्जन उद्योग स्थापना भएका थिए । यत्ति लामो समय बितिसक्दा पनि निकै कम जनताको पहुँचमा मात्रै बीमाको विस्तार भएको छ । औपचारिक तथ्यांक नभएपनि बढीमा १० प्रतिशत नागरिकमात्रै बीमाको पहुँचमा रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारत र नेपालमा बीमाको शुरुवात करिब एकै समयमा भएपनि त्यहाँ अहिले बीमा व्यवसाय निकै विस्तार भएको छ । तर नेपालमा अपेक्षाकृत रुपमा बीमा व्यवसाय विस्तार हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा ९ नयाँ जीवन बीमा कम्पनी थपिएका छन् । यसले बीमाको पहुँच विस्तारमा थप सहयोग पुग्ने विस्वास गरिएको छ । यसैसन्दर्भमा रिलाइन्स लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविणरमण पराजुलीसँग बैंकिङ खबर डटकमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत गरिन्छ :
रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्सको बारेमा बताइदिनोस न !
रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी सिद्धार्थ बैंकबाट प्रवद्र्धित संस्था हो । रिलायन्समा व्यवसायीक घरना व्यक्ति तथा संघसंस्थाको समेत लगानी रहेको छ । बीमाको पहुँचमा अत्यन्तै कम नागरिक भएको अवस्थामा बीमाको पहुँच विस्तारको योजना सहित स्थापना भएको एउटा संस्था रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स हो । यसको चुक्ता पूँजी अहिले १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । हामी अहिले आईपीओ जारी गर्ने तयारीमा छौं । आईपीओ जारी गरे पश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुग्नेछ ।
शाखा विस्तारको योजना के छ ?
हामीले भर्खरै मात्र एउटा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएका छौं । योसँगै हामीले १६ वटा शाखा कार्यालयहरु मार्फत सेवा दिदै आएका छौं । बीमाको दायरा बढाउनका लागि मुलुकको विभिन्न ठाउँमा पुग्नु पर्ने हुन्छ । यस कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामीले देशका विभिन्न ठाउँहरुमा शाखा खोल्ने योजना बनाएका छौं । हामीले चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्त सम्ममा ४० वटा शाखा कार्यालयहरु थप गर्दैछौ ।
बीमा योजनाहरु के–कस्ता छन् ?
हाम्रा विशेष गरेर २,३ वटा बीमा पोलीसीहरु छन् । यसका अतिरिक्त अन्य थुप्रै बीमा पोलीसीहरु छन् जुन नेपाली बीमा बजारमा अत्यन्तै काम लाग्नेछन् ।
बीमामा अझै नागरिकको पर्याप्त आकर्षण देखिएको छैन्, यसको कारणहरु के–के हुन सक्छन् ?
बीमामा नागरिकको पर्याप्त आकर्षण नदेखिनुको प्रमुख कारण भनेको बीमाको महत्वबारे नबुझ्नु हो । अझै धेरै नागरिकले बीमाको आवश्यकता महशुस गर्न सकेका छ्रैनन् । जसका कारण बीमामा नागरिकको पहुँच अत्यन्तै न्युन छ । बीमाबारे नबुझेर र आवश्यकता महशुस नगरेर बीमाप्रति नागरिककले चासो नदिएका हुन् । बीमाको आवश्यकता महशुस गर्नका लागि बीमाबारे बुझेको हुनुपर्छ । बीमाबारे नबुझेपछि कसरी नागरिकले बीमाको आवश्यकता महशुस गर्छन ?
भनेपछि बीमामा आकर्षण नबढ्नुको कारण बीमा शिक्षाको अभावलाई लिन सकिन्छ होइन त ?
एकदमै हो । मुलुकमा बीमा चेतनाको अत्यत्नै आवश्यकता छ । बीमा साक्षरता नभएकै कारण यसमा जति चाहिने त्यो मात्रामा आकर्षण देखिएको छैन । बीमामा नागरिकको पहुँच बढाउनका लागि बीमा शिक्षाको आवश्यकता छ । बीमा शिक्षा नागरिकमा पु¥याउन सके बीमामा नागरिकको पहुँच बढ्छ ।
अधिकांश नागरिक बीमाको दायरामा नआउनुमा कमजोरी कसको देख्नु हुन्छ ?
मैले अघिपनि भनिसके नागरिकहरु बीमाको पहुँचमा नआउनुको कारण भनेको बीमा शिक्षाको कमी नै हो । बीमा शिक्षा बारे बुझाउन नसक्नु कुनै एक क्षेत्रको मात्रै कमजोरी भन्न मिल्दैन । बीमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय भएकाले बीमा समितिको यसमा कमजोरी देखिन्छ । अर्को तर्फ हामी बीमा कम्पनीहरु आफैको समेत कमजोरी छ भने मिडियाहरुको पनि केहि कमजोरी छ । बीमा समिति तथा बीमा कम्पनीहरुले बीमाको बारेमा पर्याप्त चेतना फैलाउन नसकेकै हो । अहिले बीमा गर्न आउनेहरु धेरैजसो अभिकर्ताको माध्यमबाट आउने गरेका छन् । सिधै कार्यालयमा आएर बीमा गर्ने नागरिकको संख्या एकदमै कम छ । यसका साथै बीमा कम्पनीहरुले आफ्ना प्रोडक्टहरुबारे समेत राम्रोसँग नागरिकलाई बुझाउन नसकेको अवस्था छ । एजेण्टहरुले राम्रोसँग बुझेको भए राम्रैसँग नागरिकलाई पनि बुझाउलान । अब एजेन्टहरुले आफै राम्रोसँग नबुझेको अवस्थामा कसरी बुझाउन सक्छन् ! बीमा शिक्षा बुझाउन र कम्पनीको नयाँ पोलीसी, सेवा, सुविधा बारे बुझाउन बीमा अभिकर्ताको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । बीमा कम्पनीको शाखाकै कुरा गर्ने हो भने पनि त्यहाँ सिधै बीमा गर्न आउदैनन् । बीमा अभिकर्ताले बीमा बारे बुझाउन सके यसमा आकर्षण बढ्छ । यसका साथै सबै मिलेर बीमा शिक्षा बुझाउनु पर्छ ।
2018-03-22 - 545 view(s) - bankingkhabar